ပြေပြစ်လှပလွန်းတဲ့ သူမရဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်လေးကို အလန်းစားပိုစ့်ပေးပြီး ညို့ယူလိုက်တဲ့ မိုးမြင့်သဇင်… – Online News Post
ပြေပြစ်လှပလွန်းတဲ့ သူမရဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်လေးကို အလန်းစားပိုစ့်ပေးပြီး ညို့ယူလိုက်တဲ့ မိုးမြင့်သဇင်…
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ… ပုရိသ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အသည်းစွဲ မော်ဒယ် တစ်ဦး ဖြစ် တဲ့ မိုးမြင့်သဇင် ကို မိတ်ဆက်ပေး စရာမလိုလောက်အောင် သိကြမယ် ထင်ပါ တယ်နော်။ သူမရဲ့ ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ အပြုံးချိုချို လေးနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကောက် ကြောင်းအလှတွေ က ပုရိသတွေ ကို ဆွဲဆောင်နေ တဲ့ ထူးခြားမှုတွေ ဆို ရင်လည်း မှားမယ် မထင်ပါဘူး။ သူမ ရဲ့ ဆက်စီ ကျကျ အမိုက်စား ပုံေ လးတွေ ဟာ ဆို ရင်လည်း ဖေ့ဘွတ် စာမျက် နှာပေါ်တွင် ရေပန်း စား လူကြိုက်များတာ လည်းတွေ့ရပါ တယ်။
ယခုလက်ရှိမှာ တော့ သူမက အနုပညာအလုပ် တွေကို ဆက်လက် လုပ် ကိုင်နေတာ ဖြစ်ပြီး photo shooting အမိုက်စား လေးတွေကို လက်ခံ ရိုက်ကူးနေ တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါ့အပြင် အောင်ြ မင် ပြီး ပရိသတ်ချစ် တဲ့ မော်ဒယ်တစ်ဦး ဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံး ကြိုးစား နေတာ ကိုလည်း မြင်တွေ့ ရပါတယ်။ ဘယ်လို ဖက်ရှင်လေးတွေပဲ ဝတ် ဝတ် တစ်နေ့တစ်ခြား ပို ပြီး ထူးခြား လှပ လာတဲ့ မိုးမြင့်သဇင် ကတော့ အခုလက်ရှိမှ ာလည်း အမိုက်စားပုံ လေးတွေနဲ့ ခြွေချလိုက် ပြန်ပါပြီ နော်။
ခေါင်မိုးထပ် မှာ ဘောင်း ဘီအတိုလေး နဲ့ မိမိုက်နေအောင် ပိုစ့် ပေး ဓါတ်ဖမ်း နေတာ ဖြစ်လို့ ပုရိသတွေ ရင် ကို လှုပ်ခတ်သွားမိ အသေအချာပဲမို့ ချစ်ပရိ သတ်တွေ ကြည့်ရှု စေနိုင်ရန်အတွက် ပြန် လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါ တယ်နော်။ ကဲ….ပရိသတ် တွေကလည်း မော်ဒယ်လ် မိုးမြင့်သဇင် ရဲ့ ပုံလေးတွေ ကို ကြည့်ပြီး အသည်းလေးတွေပေးခဲ့ဖို့ မ မေ့လိုက်ပါနဲ့နော်.. ။ ဒါ့အပြင် သူ မရဲ့ ဆက် လက် လျှောက်လှမ်း မယ့် အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း ပရိသတ် တွေက အားပေးကြမယ် မလား…… . ။
ခ်စ္ပရိသတ္ႀကီးေရ… ပုရိသ ပရိသတ္ေတြ ရဲ့ အသည္းစြဲ ေမာ္ဒယ္ တစ္ဦး ျဖစ္ တဲ့ မိုးျမင့္သဇင္ ကို မိတ္ဆက္ေပး စရာမလိုေလာက္ေအာင္ သိၾကမယ္ ထင္ပါ တယ္ေနာ္။ သူမရဲ့ ခ်စ္စရာ ေကာင္းတဲ့ အျပဳံးခ်ိဳခ်ိဳ ေလးနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ေကာက္ ေၾကာင္းအလွေတြ က ပုရိသေတြ ကို ဆြဲေဆာင္ေန တဲ့ ထူးျခားမႈေတြ ဆို ရင္လည္း မွားမယ္ မထင္ပါဘူး။ သူမ ရဲ့ ဆက္စီ က်က် အမိုက္စား ပုံေ လးေတြ ဟာ ဆို ရင္လည္း ေဖ့ဘြတ္ စာမ်က္ ႏွာေပၚတြင္ ေရပန္း စား လူႀကိဳက္မ်ားတာ လည္းေတြ႕ရပါ တယ္။
ယခုလက္ရွိမွာ ေတာ့ သူမက အႏုပညာအလုပ္ ေတြကို ဆက္လက္ လုပ္ ကိုင္ေနတာ ျဖစ္ၿပီး photo shooting အမိုက္စား ေလးေတြကို လက္ခံ ရိုက္ကူးေန တာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါ့အျပင္ ေအာင္ျ မင္ ၿပီး ပရိသတ္ခ်စ္ တဲ့ ေမာ္ဒယ္တစ္ဦး ျဖစ္ေအာင္ အေကာင္းဆုံး ႀကိဳးစား ေနတာ ကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ ရပါတယ္။ ဘယ္လို ဖက္ရွင္ေလးေတြပဲ ဝတ္ ဝတ္ တစ္ေန႔တစ္ျခား ပို ၿပီး ထူးျခား လွပ လာတဲ့ မိုးျမင့္သဇင္ ကေတာ့ အခုလက္ရွိမွ ာလည္း အမိုက္စားပုံ ေလးေတြနဲ႔ ေႁခြခ်လိုက္ ျပန္ပါၿပီ ေနာ္။
ေခါင္မိုးထပ္ မွာ ေဘာင္း ဘီအတိုေလး နဲ႔ မိမိုက္ေနေအာင္ ပိုစ့္ ေပး ဓါတ္ဖမ္း ေနတာ ျဖစ္လို႔ ပုရိသေတြ ရင္ ကို လႈပ္ခတ္သြားမိ အေသအခ်ာပဲမို႔ ခ်စ္ပရိ သတ္ေတြ ၾကည့္ရႈ ေစနိုင္ရန္အတြက္ ျပန္ လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါ တယ္ေနာ္။ ကဲ….ပရိသတ္ ေတြကလည္း ေမာ္ဒယ္လ္ မိုးျမင့္သဇင္ ရဲ့ ပုံေလးေတြ ကို ၾကည့္ၿပီး အသည္းေလးေတြေပးခဲ့ဖို႔ မ ေမ့လိုက္ပါနဲ႔ေနာ္.. ။ ဒါ့အျပင္ သူ မရဲ့ ဆက္ လက္ ေလၽွာက္လွမ္း မယ့္ အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈေတြကိုလည္း ပရိသတ္ ေတြက အားေပးၾကမယ္ မလား…… . ။
Previous post အမျိုးသားထုကြီးတခုလုံး ရင်ခုန်သံတွေ ဗလောင်ဆူသွားစေမယ့် အလန်းစားပုံလေးတွေ ချပြလိုက်တဲ့ အိန်ဂျယ်ကို
Next post တင်းကိတ်တဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကိုလှုပ်ခါပြီး အမိုက်စားကကွက်လေးနဲ့ ကပြထားတဲ့စုလှိုင်ဝင်းရဲ့ ရှယ်ဗီဒီယိုလေး